झण्डै नौ वर्षको अन्तरालपछि गायक तथा गीतकार ताराबहादुर गुरुङ नेपाली लोकसंगीतमा फर्केका छन् । बाध्यताले सन् २००९ मा कोरिया भासिएपछि एल्बम निकाल्न नभ्याएका बताउने तारा ‘रहरभन्दा ठूलो के छ र’ दोस्रो कौरा गीतसहित संगीत पारखीमाझ आएका हुन् । जुन गीतको यही माघ तेस्रो साता काठमाडौंमा छायांकन गरिएको हो । उनको पहिलो कौरा ‘हे ङोल्स्यो’ हो । तनहुँ, गोरखा, लमजुङतिर प्रचलित नयाँ चुड्का गीतबारे गायक ताराले भने, ‘केटीले समेत जवाफ फर्काउने गरी बनाएको नयाँ शैलीको मेरो कौरा गीत छिट्टै युट्युवमा हेर्न सक्नुहुनेछ ।’ उनले २०५६÷०५७ तिर मामाको छोरा गायक गणेश गुरुङसँग मिलेर ‘केबुलकारमा चोक’ नामक एल्बम निकालेका थिए । त्यससँगै ‘माया छुट्छ कि’ गीत निकाले भने गुरुङ भाषाको चलचित्र ‘नासा न्होरी’ (गाउँबस्ती भित्रको)मा अतिथि कलाकारको रुपमा गीत गाएका थिए । कोरियन भाषा प्रशिक्षकसमेत रहेका गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकाका तारा भ्याइनभ्याई सांगीतिक क्षेत्रमै जोडिनुको कारण र आगामी योजनाबारे एभरेष्ट टाइम्सले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।
गायिका अनु गुरुङसँग मिलेर भर्खरै ‘रहरभन्दा ठूलो के छ र’ कौरा गीत छायांकन गर्‍यौं । दोस्रो कौरा गीत बजारमा ल्याउने तयारीमा छु ।
मौलिक गीतका लागि गाउँठाउँमै छायांकन गर्नुपर्ने होइन र ?
गाउँ जान नसकिएकोले काठमाडौंको धर्मस्थलीमा सुटिङ गरेँ । माया पिरतीको कथामा आधारित यो गीतको जुन ठाउँमा छायांकन गरिएको छ, त्यसले गाउँकै झल्को दिने छ ।
यस्तो गीत लेख्न कसरी प्रेरित हुनुभयो ?
म गाउँघरमै हुर्केको मान्छे । गाउँमा हरेक वर्षको वैशाख पूर्णिमामा सतीघाँटु लगाउने चलन छ । घाँटुको खोई (भोज) लगाउँदा गाउँलेलाई निमन्त्रणा गरिन्छ । त्यसमा विभिन्न गाउँबाट चेलीहरुसहित सबै जम्मा हुन्छन् । जम्मा भएर गीत गाउने, बजाउने, खाइपिइ गरी रमाइलो गर्ने चलन हुन्छ । त्यस्ता सामाजिक गतिविधिमा बच्चैदेखि हेलमेल हुँदै आएकोले हाम्रो मौलिक परम्परा बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचाइले यो गीत लेखेको हुँ ।
कौरा (चुड्का) लगाउँदालगाउँदै धेरै जनाको विवाह भएको पनि मैले देखेको छु । गुरुङ समुदाय र समाजको पहिचानको लागि मद्दत पुग्ने भएकोले अन्य कौरा गीत लेख्नलाई पनि मलाई जाँगर लाइरहेको छ । फेरि दुईवटा रेकर्ड हुँदैछ । एउटाको एरेन्ज भइसकेको छ । जसमा गायक पवन राना मगरले स्वर दिएका छन् । शब्द, संगीत भने मैरै । अर्को ‘सम्झनाले मलाई सतायो’ मौलिक कौरा भाका पनि तयार हुँदैछ ।
गीत, संगीतमा कसरी झुकाव बढ्यो ?
गीत, संगीतलाई चटक्कै माया मार्न पनि सकेको छैन भने पूरा समय पनि दिन सकिएको छैन । वर्षको एकपटक भए पनि दर्शक, श्रोतालाई गाउँठाउँको मौलिक लोकभाकाबारे केही कोसेली पस्केर प्रोत्साहन दिलाउने उद्देश्यले यस क्षेत्रमा लागिरहेको छुु । संगीतमा ब्रेक लगाउँदै म सन् २००९ कोरिया गएको थिए । सात वर्ष उतै बिजी भएर एल्बम निकाल्नै नसकिए पनि त्यहाँ पुग्ने नेपाली कलाकारहरुसँगको कार्यक्रममा भने सहभागी भइरहन्थेँ । एक हिसाबले भन्दा कोरिया गएर पनि गीत, संगीत छोड्न परेन ।
आक्कलझुक्कल गीत गरेर कसलाई फाइदा ?
मैले रचना गरेको गीत दर्शक, श्रोताले मन पराइदिनुहुन्छ भने घरीघरी निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन । कम एल्बम, गीत निकालौं । गुणस्तर र मान्छेको मनछुने र कालजयी गीतहरु निकाल्नुपर्छ भन्नेमा मेरो जोड हो । गीत, संगीतलाई जोगाउने काम मैले मात्रै गर्ने हो भन्ने ठान्दिनँ । यसमा सबैले योगदान दिनुपर्छ । म काठमाडौं बसे पनि गाउँमा स्थापना भएको कालिका युवा क्लबको महासचिव हुँ । क्लबमार्फत पनि मैले सतीघाँटु जगाउनेलगायत काम गर्दै आएको छु ।
अरु सबै काम छोडेर यतै लागूँ जस्तो लाग्दैन ?
अब त उमेर र समयले पछाडि परिसकेछ । नेपालमा कलाकारै मात्र भएर बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । लाइभ गाउन खप्पिस, एकदमै चलेका र चर्चा बटुल्न सक्ने कलाकारलाई मात्र राम्रो छ । हुन त, म पनि लाइभ दोहोरी गाउने मान्छे नै हुँ । परिस्थिति भनौं या अरु कारणले वैकल्पिक काम नगरी हुन्न भन्ने लाग्छ । बाध्यताले विदेशिने र खर्च पुर्‍याउनै धौ धौ हुने भएकोले एल्बम निकाल्न ग्याप गरेको हुँ । घरबाट पैसा ल्याएर एल्बम निकाले पनि रोयल्टी पाउने अवस्था छैन । अरु कामबाट जोगिएको समय गीत, संगीतमा लगाउँ भन्नै मात्रै हो ।
एउटा गीत बजारमा पु¥याउन कति रकम आवश्यक पर्दोरहेछ ?
एउटा गीत क्वालिटीको भिजुयलसहित निकालँे भने १ लाख ५० हजारसम्म लाग्छ । अडियोमात्रै हो भने पनि ५० हजार त चाहिन्छ नै ।
युट्युव लगायतबाट पनि आम्दानी हुन्छ भनिन्छ, लिने गर्नुभा छैन ?
पहिले पहिले एल्बम निकाल्दा रोयल्टी पाइन्छ भन्ने थियो । पछि सिआरबिटी, पिआरविटी भन्ने आयो । अहिले युट्युबबाट पैसा आउँछ भन्ने छ । एक पैसा लिएको छैन । पैसा आएर पनि नदिएको हो कि आउँदै नआउने हो थाहा पत्तो हुन्न । त्यही भएर पनि मैले युट्युव एकाउन्ट समेत खोलेको छैन ।
यो दुःखी पेसा कतिञ्जेल अँगाल्नु हुन्छ ?
मनको रहर मेट्न २०५६/०५७ तिर लोकदोहोरीमा लागेँ । कलाकार भनेर पनि चिनिएँ । त्यसको निरन्तरता दिइरहेको छु । आशा गरौं, राम्रो हुँदै जाला ।
लोकगीतको लगानी के गर्दा सुरक्षित होला ?
लगानीकर्ताका लागि आम्दानीको बाटो खोजिनुपर्छ । विदेश गइ कार्यक्रम गरेर पैसा कमाउला भनेरमात्रै हुँदैन । नेपाल र विदेशमा संगीत बजारलाई व्यवस्थित र प्रवद्र्धित गर्न सबै लाग्नुपर्छ । सरकारबाट गीत, संगीतमा निर्भर कलाकारको भविष्य सुरक्षित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई उत्साह जगाउने कार्यक्रम, योजना ल्याउन सक्नुपर्छ । रोयल्टीवाला संस्थाले कार्यान्वयन गर्नुप¥यो भने कलाकार, स्रष्टा र सम्बन्धित संघसंस्थाले पहल गर्नुपर्छ ।
पैसाले कलाकार बनेको र बन्नेहरुप्रति के भन्नुहुन्छ ?
पैसा भएकाले म्युजिक भिडियो बनाएर आफ्नो प्रचार गर्नु गलत हो । पैसाले कलाकार बन्ने होइन, कलाकारितालाई अगाडि बढाउन पैसा आवश्यक चिज हो । केही प्रतिभा र समाजलाई ज्ञानगुन दिन सकिने खालका सांगीतिक उत्पादन हुनुपर्छ । कला र गला भएर संगीतमा लाग्नु उत्तम । अझ सिक्नु पनि पर्छ । बुझेर लाग्ने र निरन्तरता दिनतिर ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।
तपाईले चाहिँ सिक्नु भो कि भएन ?
पहिलो एल्बम ‘केबुलकारमा चोक’ निकाल्दा संगीतको ‘स’ पनि जानेको थिएन । पछि म्युजिक क्लास लिने, म्युजिक भिडियोमा खेल्ने काम गरेँ, काम गर्दै जाँदा केही जाने र बुझेँ । अहिले त्यत्तिले मात्रै पुग्दैन । नयाँपुस्ता सिकेर आउँदा राम्रो । बजारमा बिक्न आफूमा क्वालिटी हुनुपर्छ । त्यसले निरन्तरता दिन पनि सजिलो हुन्छ । ग्यापिङ भएमा गाह्रो हुँदोरहेछ ।
अब छोटोमीठो कुरा गरौं– संगीत के हो ?
दुःख, सुखको साथी ।
मिलन, विछोडको संगम ।
एकअर्काबीचको समर्पण, विश्वास र सामाजिक संस्कार धान्नु ।
गीत, संगीतमा के मन पर्छ ?
मन पर्ने गायक, गायिका ?
गायकमा राजेश पायल राई र गायिकामा विमाकुमारी दूरा ।
केमा बढी रुची लाग्छ ?
भलिबल खेल्न ।
अन्तमा, भावी योजनासहित केही भन्नुहुन्छ कि ?
सकेसम्म गीत, संगीतलाई अगाडि बढाउने र अघि बढ्ने योजना नै हो । तर, यसमा धान्न मुस्किलै हो भने बाउबाजेले गर्दै आएको कृषि पेसा अँगाल्ने सोच छ । तर, कृषिलाई परम्परागत खेती प्रणालीभन्दा पनि आधुनिकीकरण गराउनेतिर लाग्नेछु । मेरो पहिलो गीतलाई जसरी मन पराइदिनुभयो, नयाँलाई पनि मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आश लिएको छु । लोकसंस्कृतिलाई मनपराइदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै सबैमा धन्यवाद । नयाँ कौरा छिट्टै नै बजारमा ल्याउने छु ।